Rhymes uye ngano dzeBécquer | Current Literature
Rhymes uye ngano dzeBécquer
Kunobva Mufananidzo Rhymes uye ngano dzeBécquer: XLSemanal
Chokwadi kanopfuura kamwe wakanzwa nezvebhuku Rhymes uye ngano dzeBécquer. Zvimwe waitofanira kuriverenga kuchikoro kana kusekondari. Kana kuongorora imwe yacho mune imwe kirasi, handiti?
Pasinei nokuti wakambonzwa nezvaro kana kuti zvitsva kwauri, hezvino zvatichakuudza pamusoro pebhuku racho, zvaunowana mariri, uye nei richikosha. Tinokukumbira kuti uriverenge.
1 Ndiani aiva Gustavo Adolfo Bécquer
2 Pakaburitswa Rimas y leyendas de Bécquer
3 Rimas y leyendas ndedzerupi rudzi rwezvinyorwa?
4 Kune rhymes mangani?
5 Uye ngano?
Ndiani aiva Gustavo Adolfo Bécquer
Gustavo Adolfo Becquer, kana kuti Bécquer, sokuzivikanwa kwaanoitawo, akaberekerwa muSeville muna 1836. Kubva kuFrance (nokuti vabereki vake vakabva kuchamhembe kweFrance kuenda kuAndalusia muzana remakore rechigumi nematanhatu, anoonekwa somumwe wevadetembi vakanakisisa veSpain akambovapo nyika .
Aiva nherera ari mudiki chaizvo, aine makore gumi chete. Akanga achidzidza paColegio de San Telmo kusvikira yakavharwa. Yakanga iri nguva iyo mwari wake, Manuela Monahay akamugamuchira. Iye ndiye akamupinza mukuda kudetemba sezvo, kubva achiri mudiki, kuverenga vadetembi verudo kwaive muzuva rake. Nokuda kwechikonzero ichi, pazera remakore gumi nemaviri akakwanisa kunyora Ode kusvika pakufa kwaDon Alberto Lisa.
Yakanga iri multidisciplinary person, sezvo panguva imwe cheteyo yaaidzidza pachikoro cheSeville, akadzidzawo kupenda muwekishopu yasekuru vake. Zvisinei, pakupedzisira aiva mukoma wake Valeriano uyo akazova muvendi.
Bécquer akasarudza muna 1854 kuenda kuMadrid kunotsvaga basa rine chekuita nemabhuku, sezvo chaive chido chake chechokwadi. Zvakadaro, akatadza uye aifanira kuzvipira kuita zvenhau, kunyangwe zvaive zvisiri izvo zvaaifarira.
Makore mana gare gare, muna 1858, akarwara zvakaipisisa uye, panguva iyoyo, akasangana naJulia Espín. Muchokwadi, pakati pe1858 ne1861 vese Julia Espín naElisa Guillem vaive vakadzi vaviri "vakadanana" nemudetembi. Asi hazvina kutora nguva yakareba nekuti mugore iroro rakapera akaroora Casta Esteban, mwanasikana wachiremba uye waakaita naye vana vakati wandei. Chokwadika, akamusiya makore gare gare apo akawana kuti akanga asina kutendeka kwaari nomukomana wake wekare.
Akapfuura nemumatambudziko akawanda emari, kunyanya paakasiya zvose uye akatamira nemukoma wake Valeriano nevana kuToledo. Asi muna 1869 mumwe anoyemura, Eduardo Gasset, akasangana naye kuti adzokere kuMadrid semutungamiriri wepepanhau reMadrid La Illustration. Irori rakavamba kubudiswa muna 1870 asi zvakare mhanza yakaipa yakagogodza pasuo rake, kurasikirwa nomukoma wake muna September wegore iroro. Mwedzi mitatu gare gare, pana December 22, 1870, Gustavo Adolfo Bécquer akafa nemabayo nehepatitis.
Pakaburitswa Rimas y leyendas de Bécquer
Kunobva: Prado Library
Chokwadi ndechekuti bhuku Rimas y leyendas de Bécquer, rakabudiswa kekutanga, harina kufanana nerauri kuziva zvino. Kunyanya kubva payakadhindwa yaive nemazwi mashoma.
Zvechokwadi, Payakabudiswa muna 1871, ishamwari dzakabatanidza ngano nenhetembo nechinangwa chokuti mari yavaizounganidza ibatsire chirikadzi nevana. Uye panzvimbo pokuidzwa kuti Rimas y leyendas de Bécquer, vakaritumidza kuti Obras. Yakabuda iri mavhoriyamu maviri, asi nekufamba kwenguva yakawedzerwa uye, seyechishanu, yakatanga kuva nemavhoriyamu matatu.
Rimas y leyendas ndedzerupi rudzi rwezvinyorwa?
Kunyange zvazvo bhuku rinonzi Rimas y leyendas de Bécquer richiumbwa nenhetembo nenganonyorwa, chokwadi ndechekuti rinowira mukati memhando yenhetembo.
Kune rhymes mangani?
Mukati mebhuku rekutanga reRimas y Leyendas de Bécquer tinogona kuwana 78 nhetembo kwaanokwanisa kutaura manzwiro ese achishandisa mutauro wepedyo, wakapfava asi neinenge mimhanzi kuvaka.. Iye zvino, kune mamwe akawanda, sezvo nhamba yawo yave ichiwedzera.
Kana iri chimiro chayo, chiri nyore kwazvo uye pachinzvimbo checonsonance, Bécquer anofarira assonance, kazhinji achiishandisa mumatanho akakurumbira.
Muchikwata chenhetembo, mune madingindira makuru mana atinokwanisa kuwana: nhetembo, chokwadi, inova mubatanidzwa wenhetembo nemukadzi; rudo; rudo rwekuodzwa mwoyo; uye idealized rudo.
Tinogona kutaura kuti inoita shanduko diki yerudo, kubva kune yakachena kusvika kune iyo yakaipa kwainorasika.
Mubhuku, zvidetembo zvakaverengerwa kubva I kuenda kuLXXXVI (1 kusvika 86). Pamusoro pazvo, kune mamwe rhymes, mune iyi nyaya ine mazita, ayo anoti:
Ini ndiri mubhanan’ana.
Kutsigira huma yangu.
Kana ukakopa huma yako.
Ndiani aive mwedzi!
Ngano dziri mubhuku iri ishoma kwazvo. Zvakananga, Tiri kutaura nezve 16 nyaya, kwete dzisina kubudiswa, nokuti chaizvoizvo dzakaonekwa dzakadhindwa mumapepanhau kubva muna 1858 kusvika muna 1864, uye dzakabatanidzwa.
Mune idzi ngano Bécquer anopa tarenda rake rose. Maumbirwo, dingindira, nhanganyaya uye nganonyorwa zvinoita kuti zvive zvakanakisa zvaakanyora uye kunyangwe manyorero enhetembo aya achionekwa, chokwadi ndechekuti vatambi, madingindira, zviono nezvimwe. vanoita kuti zvikwanisike seti yakakwana ine chirevo uye zano izvo vashoma vanyori vakawana padanho iroro.
Kunyanya, zita rengano dzauchawana (ikozvino dzava makumi maviri nembiri) ndeidzi:
The rose of passion.
Sabhuku nemaoko matsvuku.
Tenda muna Mwari.
Wakamboverenga here Rimas y legends de Bécquer? Unofungei nezvazvo? Tinoda kunzwa pfungwa dzenyu pamusoro pemunyori uyu, saka sunungukai kutaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Rhymes uye ngano dzeBécquer
Carla Montero. Hurukuro nemunyori weThe Fire Medallion